Ungasisebenzisa njani isiXhobo soHambo lwabaThengi ukuze uQinisekise iinzame zakho zokuSebenza ngeNtengiso | Martech Zone
Ukulungiselela eyakho ukuveliswa kwebango Imizamo yentengiso ngempumelelo, kufuneka ubonakale kuwo onke amanyathelo ohambo lwabathengi bakho kunye neendlela zokulandela kunye nokuhlalutya idatha yabo ukuze baqonde ukuba yintoni ebakhuthazayo ngoku nakwixesha elizayo. Uyenza njani lonto? Ngethamsanqa, uhlalutyo lohambo lwabathengi lubonelela ngokuxabiseka kwiindlela zokuziphatha zabakhenkethi kunye nezinto ozikhethayo kulo lonke uhambo lwabathengi. Olu lwazi likuvumela ukuba wenze amava abathengi aphuculweyo akhuthaza iindwendwe ukuba zifikelele esiphelweni kwintengiso yakho.
Yintoni kanye kanye i-analytics yohambo lwabathengi, kwaye ungayisebenzisa njani ukuphucula iindlela zakho zokuthengisa ezizayo? Masifumanise.
Luthini uhlalutyo lohambo lwabathengi?
Uhlalutyo lohambo lomthengi sisicelo esihlalutya ngokucacileyo uhambo lwabathengi. Esi sicelo kubandakanya ukulandelela kunye nokuhlalutya indlela abathengi bakho abazisebenzisa ngayo iindlela ezahlukeneyo zokunxibelelana nophawu lwakho. Ihlalutya onke amajelo-asetyenzisiweyo ngoku nakwixesha elizayo-ukuba abathengi bakho bachukumisa ngokuthe ngqo.
Ezi ziteshi zinokubandakanya:
Iitshaneli ezinonxibelelwano nabantu, ezinje ngamaziko okufowuna
Iindlela ezimbini zokunxibelelana, ezinje ngentengiso yokubonisa
Iitshaneli ezizenzekelayo ngokupheleleyo, ezinje ngezixhobo eziphathwayo okanye iiwebhusayithi
Iitshaneli ezisebenza kwiqela lesithathu, ezinje ngeevenkile zentengiso ezizimeleyo
Iziteshi ezinikezela ngoncedo lwabathengi ngokuphila, ezinje ngokuhamba ngokudibeneyo kwesiza okanye incoko ephilayo
Kutheni le nto ndifuna iiNgcali zokuHamba kwabaThengi?
Njengokuba uhambo lwabathengi lukhule ngokuntsokotha, abathengi banamhlanje balindele ukuba unxibelelwano lwabo lweshishini kunye negama lakho-kumajelo amaninzi-ukuba ahambisane neenkokheli ze-CX ezinje ngeAmazon neGoogle. Ukuba uhambo lwabathengi bakho alunamthungo kuwo onke amanyathelo endlela, baya kungoneliseki kwaye baqhubele phambili ngokukhawuleza okhuphisana nabo. Kwelinye icala, izifundo zibonisa ukuba amava omthengi olungileyo ukuqhuba ukukhula kwengeniso.
Izifundo zikwabonisa ukuba utyalomali kulawulo lwengxelo yabathengi alwanelanga ukuphucula amanqanaba akho e-CX. Oku kusilela kubangelwa yinto yokuba ingxelo ngokubanzi icelwa kuphela kumanqaku ohambo. Ngelishwa, oku kuthetha ukuba kuphela luhambo lwabathengi olufakiweyo, oluchaza gwenxa amava abathengi bakho.
Idatha engaphelelanga inciphisa amandla akho okufumana umfanekiso opheleleyo kunye nokuqonda okuchanekileyo kwindlela yokusebenza kweqhinga lakho lokuthengisa. Ikwashiya ukwimeko yokuphucula amava abathengi kunye ukubophelela amava abathengi kwiziphumo zeshishini ezibonakalayo.
Uhlalutyo lohambo lwabathengi yibhulorho phakathi kokuziphatha kwabathengi bakho kunye neziphumo zeshishini lakho. Inkqubo yohlalutyo yohambo lwabathengi yenza ukuba ishishini lakho lilandelele, lilinganise kwaye liphucule amava abathengi kumanqaku amaninzi kunye namaxesha, kubandakanya lonke uhambo lwabathengi.
Ukusetyenziswa kohlalutyo lohambo lwabathengi kwenza ukuba iinkokeli zentengiso zifuna ukuphendula imibuzo enzima, enje:
Yintoni ebangela isimilo sabathengi bethu?
Luluphi unxibelelwano lwangaphambili okanye uhambo olwenziwe ngabathengi bethu olubakhokelele apha?
Zeziphi iindlela abathengi bethu abazithatha kuhambo lwabo?
Zeziphi iziphumo ezinokubakho kumthengi ngamnye okanye kuhambo?
Olu hambo kunye neziphumo ziya kuba nefuthe njani kwiziphumo zeshishini lethu?
Zithini iinjongo zabathengi bethu?
Ngaba iinjongo zabo zihambelana njani neenjongo zethu zeshishini?
Silongeza njani ixabiso kumthengi ngamnye kwaye songeza amava abo kubathengi?
Zithini izibonelelo zoHambo lokuHlola kwabaThengi?
Uhlalutyo lohambo lomthengi sisixhobo esibalulekileyo kwinkqubo yolawulo lokuhamba kwabathengi esebenzayo. Sisiqwenga esihlalutya idatha ebanzi kwaye sivelise ukuqonda okusebenzayo. Ukuqonda okufunyenwe kolu hlobo lwenkqubo yokulawulwa kwabathengi kubalulekile kubo bobabini abathengi nakumashishini ngokufanayo. Nantsi indlela.
Amava aLungiselelwe abaThengi (CX) -Uluvo olufunyenwe ngohlalutyo olusebenzayo lweehambo zabathengi bakho lukwenza ukuba ulungelelanise inyathelo ngalinye lendlela yokufumana amava angenamthungo.
Iziphumo eziNgqinisisekayo zokuSebenza Ukongeza, ii-analytics eziqhubekayo zikuvumela ukuba uqhubeke ngokulinganisa ukusebenza kwamanyathelo okuthengisa kwimisebenzi kumajelo amaninzi kwaye uchaze ii-KPI ezifanelekileyo ukulinganisa uhambo ngalunye.
Uhlalutyo lwedatha oluvela kumajelo amaninzi kunye namaxesha abekiweyo -Ukuba ujonga uhambo lwabathengi kumajelo aliqela kunye namaxesha abekiweyo, amanqaku eentlungu ayinyani ayacaca. Ukuchonga la manqaku entlungu kukuvumela ukuba uthathe amanyathelo kwaye ube nefuthe elihle kuhambo lwabathengi bakho.
Ndingasenza njani isiHlomelo sokuHamba kwabaThengi? -Uhlalutyo lohambo lwabathengi luhlala lulungiselelwe ziinkokeli kwinkonzo yabathengi, uhlalutyo, ukuthengisa kunye neCX. Ezi nkokeli zamkela Iqonga lohlalutyo lohambo lwabathengi ukuphucula ubuchule bokuthengisa imveliso kunye namandla emilinganiselo yokusebenza.
La maqela akwandisa uhlalutyo lohambo lwabathengi ukuya:
Dibanisa idatha yohambo lwabathengi
Sombulula izazisi zabathengi abaninzi
Hlaziya unxibelelwano olungenakubalwa kuhambo oluninzi olunqamlezayo
Ukuchonga amanqaku eentlungu ze-CX kunye noonobangela bazo
Qinisekisa ukuphuculwa kohambo lwabathengi
Qinisekisa i-CX yotyalo-mali
Imephu yohambo loMthengi ngokuchasene noHambo lwabaThengi
Njengomthengisi wentengiso yebango, usenokuba sele uyiphumezile Imephu yohambo lwabathengi kwaye ndiziva ngathi ibonelela ngokuqonda okufanayo nohlalutyo lohambo lwabathengi. Ngelishwa, oku akunjalo. Ngelixa iimephu zohambo zigxile kulwazi olusemgangathweni, uhlalutyo lohambo lwabathengi luninzi kwaye lubandakanya umda omkhulu kakhulu.
Static Snapshots vs. Iinkcukacha eziqhubekayo - Imephu yohambo ibonelela kuphela ngamafoto amileyo ohambo lwabathengi bakho kwaye iswele iinkcukacha ezifunekayo ukumela uninzi lwabathengi bakho kunye nokuziphatha kwabo okwahlukileyo.
I-Static vs.Datha esekwe kwiDatha -Uhlalutyo lohambo loMthengi luqhutywa yidatha esekwe exesheni, ekuvumela ukuba ubone ukuba zitshintsha njani iihambo zabathengi ngokuhamba kwexesha. Ukukwazi ukulinganisa ngokuqhubekayo iihambo zabathengi ezinamajelo amaninzi kunye neendawo zokuchukumisa kunye nohambo kunceda abathengisi baqikelele impumelelo yohambo lwabathengi.
Uvavanyo kunye neempazamo ngokuchasene noVavanyo lweXesha leXesha -Ngaphandle kokubonakala kwedatha esexesheni kunxibelelwano ngalunye kuhambo lwabathengi, amashishini ashiyekile ukuba azame ukuphucula okutsha kuhambo lonke lwabathengi. Ayisiyiyo kuphela eyokuchitha ixesha kunye nezixhobo, oko kuthetha ukuba abathengisi bazakulinda iziphumo ezihlanganisiweyo ezingakhombisi ukuba ikho imicimbi.
Uhlalutyo lohambo lwabathengi lubonelela abathengisi ngokubonakala ukubona indlela abathengi abaphendula ngayo kuphuculo kunye neendlela ezininzi zokuchukumisa kunye namaxesha. Ukongeza, esi sicelo senza ukuba abathengisi bavavanye kwaye balandelele impumelelo yamava abathengi ekuphuculweni konxibelelwano ngexesha langempela.
Ixhaswe kukufunda komatshini kunye ne-AI, uhlalutyo lohambo lwabathengi lwenza ukuba abathengisi babone amanqaku eentlungu kuhambo lonke lwabathengi oluchaphazela kakubi i-CX. Olu lwazi luvumela amashishini aqhutywa ziidatha ukuba abeke phambili amathuba okuphuculwa kohambo lwabathengi kunye ukuqhuba ukukhula kwengeniso.
Ngaba ufuna ukuvelisa ngaphezulu kombhobho nge-30-50% ngeentsuku ezingama-90?
tags: Ukuziphatha kwabathengiamava kumakhasimendeizazisi zabathengiuhambo lwabathengiUhlalutyo lohambo lwabathengiUhlalutyo lohambo lwabathengiIinzuzo zohlalutyo lohambo lwabathengiImephu yohambo lwabathengicxukuveliswa kwebangoukuthengisa ukuthengisa okufunekayoimvuldubeUhlalutyo lwamajelo amaninziukukhula kwengenisoyintoni uhlalutyo lohambo lwabathengi